ESI MEE KA VOB TỌGHARỊA AVI - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
VOB tọghata gaa AVI
A na-eji usoro VOB mee ihe na vidiyo ndị gbanwere edegharị ka ha na-agba ọsọ na DVD. E nwere ike ịmeghe faịlụ na usoro a site na ndịọrụ multimedia na PC, mana nke niile. Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ịchọrọ ile ihe nkiri kachasị amasị gị, dịka ọmụmaatụ, na ekwentị? Maka ihe dị mma, ihe nkiri ma ọ bụ ihe nkiri na VOB format nwere ike ịtụgharị na AVI ọzọ.
Iji mee AVI site ntinye na ndọtị VOB, ịkwesịrị iji software pụrụ iche - ngwa ntụgharị. Anyị ga-enyocha ndị kachasị ewu ewu.
Hụkwa: WMV tọghata AVI
Usoro 1: Freemake Video Converter
Freemake Video Converter bụ ihe a ma ama ma dị mfe iji. Ekekọrịta site na nlereanya shareware.
Meghee ihe omume ahụ, wee jiri menu "Njikwa"nke nhọrọ ahọpụtara "Tinye vidiyo ...".
Na meghere "Explorer" Gaa na nchekwa ebe ihe ntanetị dị, njikere maka ntughari. Họrọ ya ma mepee ya site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Mgbe faịlụ vidio a na-ebuba n'ime usoro ihe omume ahụ, họrọ ya na ntinye aka, wee chọta bọtịnụ dị n'okpuru "na avi" ma pịa ya.
Nhọrọ windo na-agbanwe agbanwe. N'elu ndepụta elu - họrọ ogo profaịlụ. N'etiti - họrọ nchekwa ebe akakabarede a ga-eburu (mgbanwe nke aha faịlụ ahụ dịkwa n'ebe ahụ). Gbanwee ederede ndị a ma ọ bụ hapụ dị ka, ma pịa bọtịnụ ahụ "Tọghata".
Mgbanwe ntughari amalite. Ọganihu ga-egosipụta dịka windo dị iche, nke ị nwekwara ike ile ntọala na ihe onwunwe nke faịlụ.
Mgbe a kwụsịrị, a ga-ahụ ihe ngwụcha site na ịpị ihe "Lee na nchekwa"nke dị n'akụkụ aka nri nke windo ọganihu.
Na ndekọ a họọrọ, faịlụ AVI ahụ gbanwere ga-apụta.
Freemake Video Converter bụ doro anya na ọ dị mfe ma na-enweghị mgbagha, ma ụdị freemium nkesa, yana ọtụtụ ihe mgbochi na nsụgharị free, nwere ike ịkwatu ezi echiche.
Usoro 2: Movavi Video Converter
Movavi Video Converter bụ onye ọzọ so na kọmpụta ngwanrọ video. N'adịghị ka ngwọta mbụ, a kwụrụ ya ụgwọ, mana o nwere ọrụ ndị ọzọ (dịka ọmụmaatụ, nchịkọta vidiyo).
Meghee usoro ihe omume. Pịa bọtịnụ ahụ "Tinye faịlụ" ma họrọ "Tinye vidiyo ...".
Site na ntinye ihe nchọgharị faịlụ, kpogharịa gaa ndekọ ndekọ ma họrọ vidio ị chọrọ.
Mgbe igodo ahụ gosipụtara na windo arụ ọrụ, gaa na taabụ "Video" wee pịa "AVI".
Na nchịkọta nhọrọ, họrọ ụdị ọ bụla kwesịrị ekwesị, wee pịa bọtịnụ ahụ. "Malite".
Usoro ntọghata amalite. Ịga n'ihu ga-egosipụta n'okpuru ebe a dị ka mmanya.
Mgbe ngwụsị nke ọrụ ahụ, windo ga-emeghe mepee na folda ahụ nwere faịlụ vidiyo a gbanwere n'ime AVI.
Site na uru ya nile, Movavi Video Converter nwere ihe ndapụta ya: a na-ekesa akwụkwọ ikpe ahụ na ngwà ngwà site na Yandex, ma kpachara anya mgbe ị na-etinye ya. Ee, na oge ikpe nke 7 ụbọchị anya frivolous.
Usoro 3: Xilisoft Video Converter
Xilisoft Video Converter bụ otu n'ime mmemme kachasị mma maka ịgbanwere faịlụ vidiyo. N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị asụsụ Russian na interface.
Gbaa ngwa ahụ. Na ngwá ọrụ dị n'elu, pịa bọtịnụ ahụ. "Tinye".
Site "Explorer" gaa ndekọ na clip ma tinye ya na usoro ihe omume site na ịpị "Meghee".
Mgbe vidio ahụ jupụtara, gaa n'ihu na menu nchịkọta. "Profaịlụ".
N'ime ya, mee ihe ndị a: họrọ "Ụdị Video General"mgbe ahụ "AVI".
Mgbe ịmechara ihe ndị a, chọta bọtịnụ n'elu panel "Malite" ma pịa ya ka ịmalite usoro ntọghata.
A ga-egosipụta ọganihu na-esote ihe nkiri ahụ a họọrọ na windo ihe mmemme ahụ, yana dị n'okpuru ala windo ahụ.
Onye ntụgharị ahụ ga-akọwa banyere njedebe nke ntọghata ahụ na ụda olu. Ị nwere ike ịlele faịlụ a gbanwere site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Meghee" na-esote nhọrọ kachasị.
Usoro ihe omume ahụ nwere ihe ndọba abụọ. Nke mbụ bụ njedebe nke mbipute ikpe ahụ: ịnwere ike igbanwee obere vidiyo na oge kachasị elu nke minit 3. Nke abụọ bụ ntọghata dị iche iche algorithm: usoro ihe omume ahụ mere 147 MB ​​nkiri site na clip nke 19 MB. Debe nuances a n'uche.
Usoro 4: Hazie Ụlọ ọrụ
Nchịkọta Nchịkọta Ihe Ọdịdị Zuru Oke Na-ahụkarị pụkwara inye aka n'ịgbanwe VOB ka AVI.
Malite usoro ntọala na pịa bọtịnụ. "-> AVI" na oghere aka ekpe nke windo na-arụ ọrụ.
Na ịgbakwunye faịlụ faịlụ pịa bọtịnụ ahụ "Tinye Njikwa".
Mgbe ga-emeghe "Explorer", gaa na nchekwa ahụ na faịlụ VOB gị, họrọ ya na igodo òké ma pịa "Meghee".
Ịlaghachi na njikwa faili, pịa "OK".
Na Wọkspeesi nke window Format Factory, họrọ faịlụ vidio ebudatara na iji bọtịnụ ahụ "Malite".
Mgbe emechara, usoro ihe omume ahụ ga-agwa gị na ụda mgbaàmà, na ndepụta agbanwụrụ ga-apụta na folda ahụ ịhọrọ.
Usoro mmepụta ihe dị mma maka onye ọ bụla - n'efu, ya na mpaghara ebe Russia na nimble. Ikekwe, anyị nwere ike ikwu na ọ bụ ngwọta kachasị mma nke akọwapụtara.
Nhọrọ maka ịgbanye vidiyo si na AVV format na AVI zuru ezu. Onye ọ bụla n'ime ha dị mma n'ụzọ nke ya, ị nwere ike ịhọrọ nke kachasị mma maka onwe gị. Ọrụ ntanetị nwekwara ike ịnagide ọrụ a, ma olu nke ụfọdụ faịlụ vidiyo nwere ike ịfe ọtụtụ gigabytes - ya mere iji njikọ ọsọ ọsọ na otutu ndidi iji ndị na-emegharị ihe n'ịntanetị.